စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဖုန်းများအတွက် ဈေးနှုန်းသစ်များဖြင့် အိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Ooredoo ~ Today's Mobile Training & Service Center
MTK Device များအတွက် Flashtool Mod
Samsung J7 မှာ အားသွင်းနေတဲ့ပုံပြနေပေမဲ့ အားမဝင်ခဲ...
Window AIO Software
Vivo Y15 Firmware ရေးမယ်ရန် နည်းလမ်းတစ်မျိူး
Huawei Firmware Easy Search
Insecure Boot One Click Maker
Mobile Hardware ပြင်ဆင်ခြင်း စာအုပ်
Redmi Note2( hermes ) No Service Error & Emergen...
SP Flashtool Error 4032 Killer Fix
ပရိုဖိုင် ရဲ့ ပုံရိပ်မှာ အလံအမှတ်အသား သုံးစွဲထားတဲ...
OMH Unlocker V2
Samsung 2016 model များရဲ့ v6.0.1 တွေကို RealTerm ...
TTA Font lock update version v1.4 ( Beta )
C8816 ရုပ်​မထွက်​တာတို့ backlight မလင်းတာတို့ ကြံ...
Mi Nite3Touch way
MI(Xiaomi)ဖုန်းတစ်လုံး စ,ကိုင်တာနဲ့ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ...
Honor 4x တွေမှာ အားဝင်နေပေမဲ့ မိုးကြိူးသွားပုံ မပေ...
The Myanmar Android စာအုပ်
MAD Block Back-up Application
Samsung ဖုန်းများအတွက် FRP Tool Pro crack
Oppo F1s Screen Lock Remove file
Meizu စမတ်ဖုန်းများအတွက် No Need Root မြန်မာဖောင့်...
ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ *31# call error...
Ooredoo Smart 12 model Firmwares
Xiaomi Bootloader lock အလုံးတွေကို Bootloader unlo...
စမတ်ဖုန်းများ အားမဝင်ရင် စစ်ဆေးရန်
ပအိုဝ်းတရားတော်များ နာယူနိုင်ဖို့အတွက် Dhamma PaO...
Honor U10 မှာ ရှော့ကျနေခဲ့ရင် စစ်ဆေးမယ်
OPPO F1s (A1601) FRP ByPass No Need PC and Any Box...
ကိုရီးယားစာကို အခြေခံကစပြီးလေ့လာနိုင်မဲ့ Basic Kor...
Oppo Official Firmware Collection
Android user တွေအတွက် MAD Virus Fixer apk
Samsung J700F v5.1.1 အတွက် Baseband & IMEI Repair ...
Honor 4x တွေမှာ 2G ပဲတက်တော့ရင် ဖြေရှင်းမယ်
Huawei ရဲ့ပရတ်သတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ P10 ဒီလထဲမှာ...
Samsung ဖုန်းများမှာဖြစ်တက်တဲ့ CRom Service lock e...
Android version 4.0 မှစပြီး 5.0.x တွေအထိ error ကင်...
အရောင်းပိုင်းအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ စာရင်းလုပ...
Sim ကဒ်အားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်တဲ့ Myanmar All...
Qualcomm ဖုန်းများကို ဖုန်းထဲမှာတင် Block0Backup...
စမတ်ဖုန်းများရဲ့ Power IC အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပြစ်ချ...
MTK ဖုန်းများအတွက် အသုံးဝင် MTK Boot Mode Selector...
Xiaomi ဖုန်းများအတွက် MAD Unlock Toolkit
MT6323 ic သုံးဘယ်မော်ဒယ်မဆို power မလာရင်စစ်ဆေးနို...
All-in-One Window Activator
Samsung ဖုန်းများရဲ့ DRK Error ဖြေရှင်းနည်း
Huawei Y5II အတွက် Flashtool Backup Firmware
G730_U00 charging way
မန်းရွှေစက်တော် Android App
Driver များ Download ရယူပြီး installer မပါလာပါက အသ...
Oppo R831k MT6572 Firmware
SYH WP930+ အတွက် 100% အဆင်ပြေ Firmware
Relation Between Android Bootloader and Available ...
Honor 4x စမတ်ဖုန်းအတွက် USB way
Huawei (Qualcomm) တွေ IMEI ရေးနည်းလေးပြောပြပေးပါ့မ...
Mi1 , Mi1s , Mi2 , Mi3 တို့အတွက် Hardware ပိုင်းအသ...
Oppo R831K LCD Backlight way
TWZ W55 V09 SIM Unlock 100% Test
Xiaomi Mi 5i ကို Mi Account Remove ပြု လုပ်နည်း Vi...
MPT SIM အသုံးပြု သူများ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ အသံမကြည်ရင...
Android Software service apk
Ooredoo SIM နဲ့အသုံးပြု ထားပြီးသမျှ Call log နဲ့ S...
iOS Device များကို Activate Lock ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင...
Xiaomi Bootloader Unlock အလုံးများကို Mi Accountြ...
Ooredoo Great Wall Smart 12 Network Unlock 100% Te...
Galaxy S8 ရဲ့ တစ်မိနစ်စာ Video Review ကို MWC မှာ ...
SIM card နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်တဲ့အချက်
Xiaomi ဖုန်းများကို ADB ကနေ Factory data reset ချန...
Vivo Font Maker ( For Support Txj )
Android 5.0 နဲ့ အထက်ဖုန်းများကို Adb မှ Manual Zaw...
Huawei Y511 မှာ 8813 Bluetooth ic နဲ့အစားထိုးကြည့်...
Xiaomi တွေအတွက် Bootloader Unlock လုပ်နည်း PDF
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဖုန်းများအတွက် ဈေးနှုန်းသစ်များဖြင့် အိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Ooredoo
အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် အကြီးစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးအပ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
အသစ်မိတ်ဆက်ပေးသည့်ဈေးနှုန်းသစ်သည် ဆက်သွယ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန် သင့်တင့်မျှတသာ ဈေးနှုန်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်းသော ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းသစ်ဖြင့် ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံး နှင့် လစဉ်ဘီလ်ရှင်းစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုသောစနစ် ၂မျိုးလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးစတင်ပေးအပ်သော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် အူရီဒူး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုသည် အဆင့်မီနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည့်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ဒေတာပမာဏကို ရာထူးအလိုက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုမှုအဆင့်အလိုက်ဖြစ်စေ မိမိလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုသည် လုပ်ငန်းအသေးအလတ်အကြီး စသည့် လုပ်ငန်းဆိုဒ်အားလုံးအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း အူရီဒူးအခြင်းခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် အခြားအသုံးပြုနိုင်ခွင့်များအတွက် မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီအဆင်ပြေသည့် Mobile Pack များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လည်း Biz Basic, Biz light Biz Classic, Biz Plus, Biz max နှင့် Biz Extreme စသည့်ဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။ အခြားထပ်ဆောင်းရယူနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုအနေဖြင့်လည်း အင်တာနက်ပက်ကေ့ခ်ျများ၊ နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုရန်အတွက် ပက်ကေ့ခ်ျများ၊ ပြည်ပရောက်စဉ် အသုံးပြုမှုများကို သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူများအနေဖြင့်လည်း အခုလက်ရှိရယူထားသော ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကို မိမိ၏လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအသစ်ကို အချိန်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ အူရီဒူးမြန်မာ၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲရယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ B2B and Wholesales Officer ဖြစ်သော Mr. Anadi Agnihotri မှ “အူရီဒူးမြန်မာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ၀န်ဆောင်မှု ဟာဆိုရင် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအတွက် သူတို့နေစဥ့်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုမို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ “ ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အူရီဒူး၏ စီပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသောဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြသော ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ၀န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကို ပေးအပ်လျှက်ရှိသည့်အပြင် အရောင်းတာဝန်ခံများမှလည်း လိုအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ၏ အနာဂတ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့လည်း အဆင်သင့်အနေအထား ဖြစ်ရန်အတွက်လည်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အူရီဒူး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက +၀၉၉၇၀၀၀၀၂၃၄ သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ care@ooredoo.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည့်အပြင် http://ooredoo.com.mm/en/Business.aspx. တွင်လေ့လာနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
G730-C00 တွေ firmware ဘယ်လို့မှတင်မရ၍သော်လည်းကောင်း Deadboot ဖြစ်သွား၍သော်လည်းကောင်း အရင် boardfirmware ကိုအပြေးရှာကြမှာပါ ဒါပေမဲ့ ခက်တာ...
အခုပြောပြမှာက နောက်ဖုန်းခွာပြီးရေးရမဲ့ပုံစံပါ Test Point ထောက်ပြီး Qualcomm 9008 Mode ကနေရေးရမှာပါ 9008 ၀င်ဖို့အောက်က ကြိုးလေးလိုတယ်ဗ...
Huawei (Qualcomm) တွေ IMEI ရေးနည်းလေးပြောပြပေးပါ့မယ်
ပထမဦးစွာ Phone ကို Root ဖောက်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်ကို ရယူလိုက်ပါ။ •°•°•°• Background Open bat file Download Link •°•°•°•...
Huawei ဖုန်းများအား Hardware ပိုင်းအသုံးပြုရန်အထောက်အကူပြု Way apk
Huawei ဖုန်းများအား Hardware ပိုင်းပြု ပြင်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အတွက် Way ဆိုတဲ့ apk လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Huawei စမတ်ဖုန်းများ...